यौ’न स’म्प’र्कको बे’ला म’हि’लाहरु किन चिम्लन्छन् आँखा ? यस्तो छ कारण - Babal Khabar
यौ,न स’म्प’र्कको बेला म’हिलाहरु आँ’खा चि’म्लने गर्दछन् ।
पुरु;षहरुको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर महि’लाहरु किन आँ’खा च’म्ल,न्छन् ? कतिपयले आँ,खा ब,न्द नगर्न सक्छ ।
यदि आँ,खा ब,न्द गर्दैन भने केही न केही यौ,न सम.,स्या छ भनेर पनि बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो भए के यौ,न स,म्’र्कको क्र,ममा महि,लाले आँ,खा चि,म्ल,नैपर्छ ? किन उनीहरु आँ,खा चि,म्ल,न्छन् ? के छ यसको कारण ?
एक शोधका अनुसार जसै हा,च्छ्यिु गरिन्छ, त्यसमा हाम्रो कु,नै नि’न्त्रण हुँदैन । हा,च्छ्यु,, गरिरहँदा हाम्रो आँ,खा ब,न्द हुन्छ, यो स्व,त.,स्फूर्त हुने क्रिया हो । ठिक यसैगरी महिलाहरु यौ,नमा चर,मसु,खको बेला आँ,खा खो,ल्न स,क्दैनन् । खास,गरी यसबेला उनीहरुको ग्ल्या.,न्डबाट तरल स्रावित हुन्छ, जसले दिमागलाई आँ,खा ब,न्द गर्नका लागि स,न्देश पठाउँछ ।
एक सर्वे अनुसार कुनै महि,ला यदि यौ,न स,.म्प,र्कका क्रममा आँ,खा ब,न्द गर्छन् भने यसको अर्थ हुन्छ कि उनले यौ,न स,म्प.र्कको पुरा,पुर आ,नन्द लिइरहेका छन् । शो,धबाट यो कुरा थाहा भएको छ कि, आँ,खा ब,न्द हुनुसँग दि,मागको गहि,रो स.,म्बन्ध छ ।
यस्तो मानिन्छ कि, यदि दिमाग खुला रहन्छ भने महि,लाको ध्या,न पा,र्ट.नरमाथि पर्न जान्छ । यसले उनको ध्या,नभंग हुन्छ । त्यहीकारण उनीहरु क्ला,इ.,मेक्ससम्म पुग्न पाउँदैनन् ।
यौ,न स,म्प.र्कका क्रममा द’,म्पती एकअ,र्कावीच एका,कार भएको अनुभूत गर्छन् । उनीहरु आफुहरुवीचैका इ,न्टी,मेसी र के,मे,स्ट्रीमा इन्जोए गरिरहेका हुन्छन् । यौ,न स,म्प,र्कका क्रममा उनीहरु पार्टनरलाई सहयोग र सुरक्षा महसुस गराउन चाहन्छन् ।
यौ,न स,म्प,र्कका क्रममा एका,ग्रता एकदमै जरुरी हुन्छ । आँ,खा खु,ला हुँदा बाहिरी चि,ज एवं आ,वाजले यौ,न,,प्रतिको ध्या,न भंग गरिदिन्छ । त्यसैले यौ,न स,म्प,र्कका क्रममा म.हि.लाहरु आँ,खा ब,न्द गर्छन् ।
यौ,न सmम्पर्कका क्रममा महिmलाहरुले आँmखा चिbम्लनुमा ला,ज प,नि एउ,टा का,रण हु,नसक्छ । यद्य,पी यस्तो ला,ज भने पहि,लो पट,कको यौmन स,mम्पmर्कमा हुने गर्छ । आफुmलाई स,र्वाङ्ग बना,इरहँदा उनीहरु लजाउँछन् । असहज महसुस गर्छन् । त्यही कारण उनीहरु आँ,खा चि,म्ल,न्छ,न् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevविदेशमा श्रीमान हुनेका श्रीमतिहरुले एक पटक अ’वस्य पढ्नुहोला !
nextयी ३ काम कुनै पनि महीला र पुरुष दुबैले धेरै बेरसम्म गर्न हुदैन ! नत्र …